PPC + Organic = Zvimwe Zvinodzvanywa Martech Zone
NeChishanu, Kurume 30, 2012 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe chiri chidimbu chekuzvishandira, Tsvagiridzo yeGoogle yakagadzira iyi infographic kuti ipe humbowo hwekuti tinya-kuburikidza nemitengo inochinja kana organic yekutsvaga mhedzisiro ichiperekedzwa neye yakabhadharwa yekutsvaga kushambadzira. Kubatanidza izvo zviviri kunogona kubatsira kushambadzira kwako kubva kumakona maviri akasiyana… kupa zvishoma zvishoma zvivakwa kuti ubaya pane peji rekutsvaga injini. Chimwe chikonzero, icho chingave chakanyanya kutsoropodza, kudzinga mumwe angangokwikwidza!
Tags: tsvakurudzo yeGoogleGoogle +chepamusoro chinzvimboorganic searchyakabhadharwa kutsvagakubhadhara pakukandappcppc kushambadziranyokaserp ctrserp chinzvimbo
Iko kune chimwe chinhu chinofanira kutaurwa chekuve nekubhadharwa uye organic rondedzero pane imwechete peji reSERP. Kutanga, inokodzera mushanyi. Kana mhando yako ikaratidza kaviri, inofanirwa kuve inoenderana nezvinodiwa nemutsvagi. Chechipiri, inovandudza mikana yekudzvanywa. Vamwe vanhu vanodzvanya pane ad, vamwe vanotarisa organic zvabuda. Kana iwe ukaratidza mune zvese uri kukwezva marudzi ese.